ပန်ဒိုရာ: P for.... ?
P for.... ?
မရီတာ တို့ မသက်ဝေ တို့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ တွေ့လို့ ဘယ်သူမှ မတက်ဂ် ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာရေးသည်။ ဟဲဟဲ။
1. What is your name : Pandora
2. A four Letter Word : Poem (Of coz…)
3. A boy's Name : Pablo Picasso
4. A girl's Name : Pollyanna
5. An occupation : Prime Minister (or President)
6. A color : Pinkish Purple
7. Something you'll wear : Pants
8. A food : Pineapple Pizza
9. Something found in the bathroom : Pipes
10. A place : Paris (French version), Pyin-ma-nar (Burmese version)
11. A reason for being late : Power failure (Well… Burmese version too.)
12. Something you'd shout : Police.. police!!!!
13. A movie title : P.s., I love you.
14. Something you drink : Purple passion punch
15. A musical group : Pink Floyd
16. An animal : Python
17. A street name : Pasir Panjang Road (Singapore version), Pan-soe-dan Road (Yangon version)
18. A type of car : Prado
19. The title ofasong : Power of Love
20. A verb : Protest ( I mean …averb..)
Pennsylvania က Pittsburg မှာနေတဲ့ Pe nai က Pearl centre ကအပြန် peninsula plaza မှာ Pandora ကို Photo copy ကူးနေတာမြင်ခဲ့ပါသည်
အော်.. ခုတော့လည်း pathain ကို မေ့ပီပေါ့လေ..။
အားပါးးးးးးးးးးးး စိတ်ကူးကောင်းလေးနဲ့ မ Pan ရဲ့ P For...? လေးတွေ လာအားပေးပါတယ်။
ဟုတ်ပ အမ(မေငြိမ်း) ရယ်
pathein လို့ပြောဖို့ဝင်လာတာ အမ ဦးသွားတယ်
အမချိုသင်းတက်ဂ်ထားတာ မရေးရသေးဘူး... သူကရေးလိုက်တော့ P for ဘယ်လို ဆက်ရေးတော့မလဲ.. :( ရေးတော့ဘူး...
Pizza နဲ့ဆို Pepsi နဲ့ပိုလိုက်မယ် :D
Please practically practice "Pacifism", Princess Pandora.
ပဲ (Pei) များတာလည်း ထည့်ရေးဦးလေ... :D
Perfect Person Pandora,
Peanut ကာတွန်းရော မကြိုက်ဘူးလား အစ်မ :P
အလုပ်အကိုင်ကို သဘောကျတယ်မ ...
comment လေးတွေ ဖတ်ရတာလဲ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ =)
ပီပီ ပီပီ သိပ်မပေါဖို့ပြောခဲ့မည်
သူ့ P လေးတွေက အကောင်းလေးတွေချည်းပဲ...
ကိုယ့် T လေးကတော့ T for တီကောင် ဖြစ်မသွားအောင် မနဲရေးလိုက်ရတယ်... ဝှုးးးးးးးးးးးး
ဝတျရညျ..... - "မိုးတှရှောနခြေိနျခဏ" ထဲမှာ ကိုမြိုးကြော့ ဖနျတီးထားခဲ့တဲ့ "ဝတျရညျ" ဟာ Piano သံစဉျထညျ့ထားတဲ့ ကဗြာတဈပုဒျ သို့မဟုတျ ခဈြသူကောငျမလေးအကွောငျးကိုရေးထားတဲ...
အားလုံးကို ပြတ်သွားအောင် …